सबैभन्दा बढि हेरिएका भिडियोसहितका समाचार Archives - TV Annapurna
Category: सबैभन्दा बढि हेरिएका भिडियोसहितका समाचार
विमल खड्का, टिभी अन्नपूर्ण। वर्षायाम सुरु भएपछि राजधानी तथा राजधानीभन्दा बाहिर जिल्लाका सडक बालबालिकाको बिचल्ली हुने गरेको छ । विभिन्न कारणले घर, परिवार छाडी सडकमा जीवन बिताइरहेका बालबालिकाको वर्षातको समयमादिनहरु सडकमै रुझेर भिजेरै बित्छ । दिन होस वा रात सडकमा नै बिताउने, त्यहींखाने, त्यही घुम्ने, त्यही सुत्ने बालबालिका सडकमै आश्रित छन् । यस्ता बालबालिका असहाय, अशक्त वा विभिन्न घटना वा समस्यामा परेर सडकमा खुल्ला आकाशमुनि जीवन बिताउन बाध्य भइरहेका छन् । कति बालबालिकाका आफन्त नै नभर्इ यसरी रातदिन खुल्ला आकाशमै फिरिरहेका छन् । कति बालबालिकाको यो रहर होला कतिलाई बाध्यता?…
प्रदेश- ३, सबैभन्दा बढि हेरिएका भिडियोसहितका समाचार, समाचारLeaveacomment
तुलसी अर्याल/ टिभी अन्नपुर्ण पहिले एसएलसी र अहिले एसइईलाई निक्कै महत्वको शिक्षा मानिन्छ । १० वर्षसम्म पढेको हुनाले पनि त्यसपछि अब कुन विषय कुन विद्यालयमा पढ्ने भन्ने विषय अति नै महत्वपूर्ण हुन्छ । १० कक्षासम्मको पढाई सकेपछि लाखौँ विद्यार्थी र अभिभावकको चासो र चिन्ताको विषय भनेको अब कुन अब १२ कक्षासम्म कुन विषय कुन विद्यालयमा पढ्ने भन्ने हुन्छ । हुन त हाल कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई नै विद्यालय तहमा राखेको छ । तर पनि कक्षा १० पछिको गन्तव्य करिब १० वर्ष बढीको मेहनत र प्राप्त गरेको सीप र ज्ञानलाई त्यसपछिको…
सबैभन्दा बढि हेरिएका भिडियोसहितका समाचार, समाचारLeaveacomment
July 12, 2018 Annapurna TV
रामु सापकोटा, काठमाडौं र आलिया अलहाज्जरी, मलेशिया मलेशिया— पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको प्रमुखमध्ये एक गन्तव्य । ‘फ्रि–भिसा फ्रि टिकट’ भनिए पनि जसोतसो ऋण जोहो गरी म्यानपावर कम्पनीलाई रु.१ लाख हाराहारी बुझाएर मलेशिया पुग्छन्, नेपाली कामदारहरू । तिनका आफ्नै सपना हुन्छन् । मासिक रु.३०–३५ हजार कमाउने, ऋण चुक्ता गर्ने, बचेको पैसाले नेपालमा रहेका परिवारको खर्च धान्ने । उपल्लो तहको औपचारिक शिक्षा र हातमा सीप नभएका उनीहरू धेरैजसो कडा शारीरिक श्रम गर्न जान्छन् । यस्ता धेरै कामदारलाई थाहा नभएको कुरा के भने २०७० साल भदौदेखि मलेशिया गएका ६ लाख…
July 12, 2018 July 13, 2018 TV-Annapurna
विमल खड्का टिभी अन्न्पूर्ण काठमाडौँ पशुपतिनाथ मन्दिर नेपालका लागि मात्र होइन, विश्वभरकै हिन्दुहरूले पुज्ने पवित्र तीर्थस्थल मन्दिर । नेपाल भारतसहित जत्ति पनि हिन्दु धर्मावलम्बी छन् उनीहरूको आस्थाको केन्द्रबिन्दु । आराध्यदेव पशुपतिको दर्शन गरेपछि मात्र धर्म दर्शन पूरा भएको मान्छन् । तर, यही पवित्र भूमि पशुपतिभित्रै पूजाको लागि बेचिने फुलहरूमै दलाली हुने गरेको तथ्य भेटिएको छ । पशुपतिनाथ आसपासमा अव्यवस्थित रूपमा रहेका टराहरुबाट बेचिने गरेका पुल तथा अन्य सामानहरूमा व्यापारीहरूको बिगबिगीले पशुपतिनाथ क्षेत्र विकास कोषले हैरानसमेत व्यहोर्नु परेको छ । करिब १ सय ५० भन्दा बढी टहराहरू भएको पशुपतिनाथ वरपर फुलप्रसाद…
सबैभन्दा बढि हेरिएका भिडियोसहितका समाचारLeaveacomment
July 10, 2018 July 10, 2018 Annapurna TV
विमल खडका, टिभी अन्नपूर्ण । मानिसको जीवन जिउनका लागि भगवानले पनि कुनै न कुनै सिप जन्मजात दिएका हुन्छन् भन्ने गहकिलो उदाहरण हाम्रो समाजका केही व्यक्ति र उनका कलाले बताउँछ । बिहान सबेरै उठेर आमाको स्याहार अनि साँझ बिहानको गाँसको जोहो गर्न रत्नपार्कको डिउटि समालेकै छन् । यस्तो दैनिकी भएका व्यक्ति हुन् एक शारीरिक रूपमा भिन्न क्षमता भएका आनन्द पासवान । जो काठमाडौँको मुख्य ठाउँ रत्नपार्क, सुन्धारा र बसन्तपुर दरबारको एक कुनामा चित्र कोरिरहेका हुन्छन् । उनका दुवै हात अनि खुट्टा पनि छैन । तर पनि उनी आनन्दित भएर चित्र बनाइरहेका…
July 9, 2018 July 9, 2018 Annapurna TV
तुल्सी अर्याल, टिभी अन्नपूर्ण, काठमाडौं सेवाको नाममा सञ्चालित राजधानीका धेरै एम्बुलेन्सहरु व्यापार मुखी रहेको पाइएको छ । बिरामीको बाध्यताको फाइदा उठाउँदै एम्बुलेन्सलाई कमाइ खाने भाडो बनाएको छ । बिरामीबाट उनीहरुले असुल गर्ने शुल्कमा पनि एकरुपता छैन । मनपरि ढङ्गले आफु अनुकुल र मान्छे हेरेर उनीहरुले शुल्क असुल गरिरहेका छन् । काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा रहेका बिरामीका आफन्तका अनुसार एम्बुलेन्स सञ्चालकहरुले लुट मच्चाइरहेका छन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा प्यारालाइसिस श्रीमतीको उपचार गराई रहेका धादिङका सुदीप आचार्य ७९ किलो मिटरको यात्रामा ४ हजार तिरेर काडमाडौं पुगे । उनले भने, चालकहरु ठुलै बारगेनिङ गर्छन् ।…
July 6, 2018 July 6, 2018 Annapurna TV
राजकुमार विष्ट / नवराज श्रेष्ठ । काठमाडौँ भित्रै दैनिक सयौ सवारी साधान ओहोरदोहोर गर्ने एउटा पुलको गएको ५ महिनादेखी हरिबिजोग छ ।काठमाण्डौं महानगरपालिका वडा नं ८ जयबागेश्वरी स्थित बागमति खोलाको पुलमा ठेकेदारको लापरबाही र सरकारी निकायको बेवास्ताका कारण हजारौै सवारी साधन त्यसका यात्रुले सास्ती भोग्दै आएका छन । गएको पाँच महिनादेखी दैनिक हजारौ सवारी ओहोरदोहोर गर्ने पुल यस्तो अवस्थाका कारण पाँच हजार भन्दा बढी सवारी एकै स्थानमा दुर्घटनामा परेका छन । चावहिल बाट गोठाटार र पेप्सीकोला क्षेत्र जाने यो पुल निर्माण गर्दा ठेकेदार कम्पनी र सडक विभागको गम्भीर लापरबाहीका कारण यस्तो…
विमल खड्का । नवराज श्रेष्ठ , टिभी अन्नपूर्ण काठमाडौँ । राजधानीका विभिन्न ठाउँमा सञ्चालन भइरहेका वधशालामा काटिने राँगा भैँसीको मासु कुहिएको र सडेको पाइएको छ । उपत्यकामा दैनिक ८ सय देखि १ हजार वटासम्म राँगा भैँसीको मासु खपतहुने ठाउँमा यस्तो भेटिएको हो । दैनिकजसो प्रयोग हुने मासु यसरी बेचिँदै आएको पाइएको हो । तर, बजारमा यस्तो फोहोर वधशालामा काटेको र कुहिएको मासु हामीलेखाइरहेका छौँ ।तर, यो मासु कसरी आइरहेको छ । हामीलाई सोच्ने फुर्सद नै छैन । अर्कोतिर काठमाडौँमा धेरै परिणाममा दैनिक बिक्रीहुने मासु कसरी र कस्तो अवस्थामा तयार गरिन्छ भनेर…
July 5, 2018 July 5, 2018 Annapurna TV
तुल्सी अर्याल, टिभी अन्नपूर्ण । सहर जति विकसित भए त्यति नै भर्दगोल बन्दै गएका छन् । राजधानी काठमाडौँमा अव्यवस्थित र भर्दगोल रूपमा रहेका तारहरूले काठमाडौँको सुन्दरतालाई अझै कुरूप बनाएको छ । विद्धुतका प्रत्येक पोलमा अति भर्दगोल रूपमा विभिन्न सेवा प्रदायक कम्पनी र संस्थाका तारले काठमाडौँको रूप नै नराम्रो बनाएको छ । कुरूप देखिने मात्रै होइन यस्तो अव्यवस्थित तारले विभिन्न दुर्घटना समेत निम्त्याएका छन् । काठमाडैंको यो अवस्था अहिलेको भने होइन । वर्सौदेखि यो समस्या रहँदै आएपनि स्थानीय निकाय, सरकार वा प्राधिकरण कसैको नजर भने पुगेको छैन । सडक विस्तारको क्रममा धराप…
तुलसी अर्याल/ टिभी अन्नपुर्ण वर्षौँ देखि यातायात क्षेत्रमा जरा गाडेर बसेको सिन्डिकेट लामो प्रयास पछि सरकारले हटाउने निर्णय गर्‍यो । यातायात व्यवसायीले आन्दोलन गरे तर, सरकार गलेन । झन् कडा रूपमा प्रस्तुत भयो । सिण्डिकेट तोडिने भएपछि अब त केही राहत पाइन्छ की भनेर धेरैले सरकारको निर्णयको खुलेरै स्वागत पनि गरे । तर राजधानी काठमाडौँ यात्रुले सास्ती पाउन भने अझै छुटेको छैन । बिहान र बेलुकाको समयमा काठमाडौँका सडकमा गुड्ने सार्वजनिक सवारी साधनमा भेडाबाख्राको शैलीमा मान्छेलाई कोचिन्छ । सरकारले बनाएको क्षमताभन्दा बढी यात्रु कोच्ने सवारी साधनलाई कारबाही गर्ने निर्णयको पनि…
ढल्यो केशर पुस्तकालयको चमेना गृह र शौचालय
बारका पूर्व अध्यक्ष शम्भू थापा उदयश्री बहुमुखी क्याम्पसको अध्यक्षमा
अस्थिरता र अराजकताबाट कुम्ल्याउनेहरु अहिले खुशी छैनन्, छट्पटिएका छन् : प्रचण्ड
जुम्लामा सरकारको व्यवहारको विरोधमा डा. केसीद्वारा स्वास्थ्य जाँच गर्न अस्वीकार
डा. केसीलाई काँग्रेसले उचालेको छैन : देउवा
अनशन स्थगित गरेर वार्तामा आउन डा.केसीलाई सरकारको आह्वान